Md Farmaajo: Waxaan Weerarnay Saldhig Alshabab
Qoraal ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi ayaa lagaga hadlay weerar lagu qaaday saldhig tababar oo ururka al Shabaab ay ku lahaayeen meel u dhow deegaanka Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe.
Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hawlgalkan ay fuliyeen ciidamada Soomaalida ee sida gaarka ah u tababaran oo taageero ka helaya ciidamada kale ee caalamiga ah, iyaga oo bartilmaameedsaday saldhigan oo ahaa goob tababar, waxaa qoraalka ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay in hawlgalkaasi u dhacay si guul ah, isla markaana lagu burburiyey Taliskii Shabaab iyo weliba isku xidhkii sahayda.
Dhinaca kale, Dana White oo ah afhayeen u hadashay Wasaaradda Gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa ka hadashay weerarkii lagu qaaday deegaanka Saakow ee gobolka Jubadda Dhexe. Miss White waxay sheegtay in 11ka bishan June, saacaddu markii ay ahayd qiyaastii 2 saqda dhexe ka dib ay Wasaaradda Gaashaandhigga ee Marayakanku ay qaadday weerar ka dhan ah ururka Alshabab ee Somalia. Afhayeenka ayaa sheegtay in weerarku uu ka dhacay qiyaastii 185km dhinaca koonfur-galbeed ee magaalada Muqdisho, iyada oo weerarkaas ay ku dhinteen 8 maleeshiyadii la weeraray ka mid ah. Afhayeenka ayaa sheegta in iskaashi dhex maray Maraykanka iyo dadka ay wada shaqeynta leeyihiin. Talaabadan ayaa afhayeenku sheegtay in jawaab toos ah ay u tahay falalka Alshabab, sida mid dhawaan uu ururku ku qaaday ciidanka Somalia.
Afhayeenka ayaa sheegtay in weerarkan la qaaday iyada oo la raacayo ogolaanshihii madaxweyne Trump ee soo baxay bishii March ee sanadkan 2017, kaas oo ogolaanay in ururka Alshabab lagu weerari karo goobo gaar ah, iyada oo taageero la siinayo ciidanka Somalia.
Afhayeenka ayaa sheegtay in Maraykanku uu sii wadayo taageerada ciidanka ay wada shaqeynta leeyihiin ee Somalia ilaa inta xasilooni iyo amni ay gobolka ka dhalanayaan.
Dhageyso Weerarka Saakow